Fitantanana ny tanàna : manohy ny fiaraha-miasa ny UCTU sy ny CUA | NewsMada
Fitantanana ny tanàna : manohy ny fiaraha-miasa ny UCTU sy ny CUA
Par Taratra sur 12/01/2017
Nanao ranolava. Tonga niarahaba ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Ravalomanana Lalao ny eo anivon’ny mpitatritra eto an-dRenivohitra (UCTU) notarihin’ny filohany, Andriambinitsolomora Bernardin, omaly. Nisongadina fa ilaina ny fifanatonana sy ny fiaraha-miasa hampandrosoana ny fitaterana eto an-dRenivohitra. Anisan’ny rafitra mpiara-miasa lehibe amin’ny mpitatitra rahateo ny CUA, araka ny voalazan’ny lalàna. “Hiezaka hanatsara ny kalitaon’ny asanay izahay sady hikajy ny tontolo iainana. Raharahan’ny rehetra koa ny famahana io olan’ny fitohanan’ny fifamoivoizana io”, hoy ny mpitatitra.
Momba ny saran-dalana indray, nilaza ny tsy mbola hampiakatra izany aloha izy ireo ato ho ato. “Miandry ny fampanantenana nataon’ny fanjakana ny amin’ny hanomezana fanampiana 12 miliara Ar eo anelanelan’ny volana novambra 2016 sy ny avrily 2017 izahay izao satria tsy mbola voaray izany”, hoy ihany izy ireo.
Tsiahivina fa 3 500 ny taxi-be eto an-dRenivohitra ary mahatratra 5 hetsy mahery ny fiara madinika.
Miaraka ny fitantanana sy ny finoana
Noraisin’ny ben’ny Tanàna koa ny eo anivon’ny Dorkasy foibe FJKM. Nivoitra tamin’izany fa tsy afaka misaraka ny fitantanana sy ny finoana. “ Anton’ny tsy fanarahan-dalàna ny tsy fahafantarany an’Andriamanitra. Ilaina ary tsy maintsy atao ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra indrindra ho an’ny mponin’Antananarivo”, hoy ny filohan’ny Dorkasy foibe FJKM ny mpitandrina Randriamanana Valimbavaka.